कृषि / सहकारी « GDP Nepal
मूल्य नपाएपछि चियाबगान फाँड्दै किसान, सुन्दर बगानमा अब सिमेन्ट उद्योग !
झापा । गुलियो उखुको खेती गर्ने किसानको तितो कथा सेलाउन नपाउँदै चिया किसानको चर्चा सुरु भएको छ । हुन त चिया किसानको व्यथा नयाँ होइन तर असह्य भएपछि उनीहरुले सुन्दर
गोल्यान ग्रुपले ल्यायो ‘माटो’ ब्रान्डमा विषादीरहित तरकारी, झापामा २ सय बिघामा खेती
काठमाडौं । मुलुकको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना गोल्यान समूहले ‘माटो’ ब्राण्डमा विषादीमुक्त तरकारी बजारमा ल्याएको छ । गोल्यान समूह अन्तर्गतको गोल्यान एग्रो प्रालिले माटो ब्राण्डमा कृषि उपजको उत्पादनसगै बिक्री सुरु गरेको
सहकारीको ब्याजदर विरोध गर्नेलाई केशव बडालले भने– ओरेन्टलका छाउराहरु !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा अगुवा सहकारीकर्मी केशवप्रसाद बडाल सहकारीको ब्याजदरको विरोध गर्नेहरुप्रति असहिष्णु देखिएका छन् । उनले यसरी विरोध गर्नेहरुलाई सुधीर बस्नेतको विवादास्पद सहकारी ओरन्टलबाट परिचालित
रुद्राक्ष चोरको बिगबिगी भएपछि बोटमै सिसी क्यामेरा र गार्ड
संखुवासभा । पूर्वी नेपालमा आम्दानीको बलियो स्रोत भएको छ– रुद्राक्ष । तर, यसलाई जोगाउन भने सजिलो छैन । चोरहरुको बिगबिगी छ भने राम्रा बोटमा विषादी हालेर उपद्रो गर्नेहरुको पनि कमी
प्रचण्डको कार्यक्रमको अपनत्व ओलीले लिएनन्, कृषि परियोजना पुनरावलोकन गर्ने
प्रचण्डको कार्यक्रमको अपनत्व ओलीले लिएनन्, कृषि परियोजना पुनरावलोकन गर्ने काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को पालामा सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको
कृषि र डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी खोल्नुपर्छः डा. शंकर शर्मा
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले कृषि तथा डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारेका छन् । योजनाविद् शर्माले
ट्रेडिङमा नलाग्ने एकमात्र व्यवसायी पवन गोल्यान भन्छन्– कृषिमै भविश्य छ !
काठमाडौं । पवनकुमार गोल्यान नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पर्यायजस्तै नाम हो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज तथा शिवम् प्लास्टिकलगायतका निकासीजन्य उद्योग सञ्चालन गरिरहेका गोल्यान एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् ।
लौठसल्ला खेती गर्ने हो ? प्रतिकेजी १५ लाखसम्ममा बिक्छ !
काठमाडौं । नेपालका वनपाखामा पाइने दुर्लभ वनस्पती लौठसल्ला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी १५ लाख रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । क्यान्सरजस्ता रोगको औषधिका लागि केमिकल पाइने लौठसल्ला नेपालमा पाइने भए
महासंघको कृषि उद्यम केन्द्र झनै ‘एग्रेसिभ’: प्रदेश ३ सरकारसँग साझेदारी सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र अहिले कृषि उद्यम केन्द्रमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पदाधिकारीबाटै आरोप लागेपछि छानबिन चलिरहेको छ । तर, केन्द्रले यही बीचमा प्रदेश ३ सरकारसँग दूरगामी महत्वको रणनीतिक
गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा गफमात्र ! ४० करोड बक्यौता उठाउन उखु किसान काठमाडौंमा
काठमाडौं । एउटै समस्या समाधानका लागि बारम्बार काठमाडौं धाइरहनुपर्ने नियतिले ग्रसित उखु किसान फेरि काठमाडौंमा आएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमै सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि किसान भने आफ्नो श्रम